လမ်းဆုံ .....: zSHAR တွင် File Upload လုပ်ခြင်း
zSHARE ကို သွားပါ http://www.zshare.net/adsblocked.html
Create Free Account ကိုနှိပ်ပါ
ပုံစံပါ အချက်အလက်တွေ ဖြည့်ပေးပါ။ မိမိ username ဖြင့်ဝင်လို့ရမရ .Chack Availability! ကို နှိပ်ပြီးစစ်ပါ။ verification code ကိုဖြည့်ပါ . I have read and agree to the TOS ရဲ့ ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Create My Account ကို နှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ အီးမေးထဲကို Activate Link ပို့ပေးထားပါမယ် .. အီးမေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
zSHARE က ပို့လိုက်တဲ့ Link ကို နှိပ်ပါ။
Username .. Password ကို နှိပ်ပြီး Signin လုပ်ပါ .. 2048MB အထိ Upload လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Signin လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ .. Upload စလုပ်ဖို့အတွက် .
Upload Multiple Files ကို နှိပ်ပါ
Browse ကိုနှိပ်ပြီး မိမိ Upload လုပ်မည့် File ကို ရွေးပါ ..Share it! ကို နှိပ်ပါ။
နောက်ထပ်ဖိုင်များကိုလည်း ရွေးပြီး Upload လုပ်နိုင်ပါတယ် ..
Upload Time စောင့်ပေးပါ
Upload Successfully! ဖြစ်သွားပြီး ဆိုရင်တော့ My Files ကို နှိပ်ပါ။
My Files ထဲတွင် မိမိတင်ထားသော ဖိုင်များကို တွေ့ရပါမယ် ..
Download Link ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Share ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Download Link ကို ရပါပြီ။
အားလုံးပြီးရင်တော့ LogOut လုပ်ပြီး ထွက်ပါ။